Hoog Muujiye Aan Jirin – Buumbuuninta aragtida Siyaasiga qalafsan inta badan yaa lagu yaqaan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts tagged Hoog Muujiye Aan Jirin – Buumbuuninta aragtida Siyaasiga qalafsan inta badan yaa lagu yaqaan?
Buumbuuninta aragtida Siyaasiga qalafsan inta badan yaa lagu yaqaan? Muujinta hadalada qaar ka dhaca ah ee siyaasiyiinta qalafsan kuwaasi oo la mid ah kuwii Soomaaliya u bilaabay nidaamka jabhadeysi ee burburiyay dowladnimada Soomaaliyeed. Waxaa dhawaanahan soo if baxayey warbaahino website-yo iyo Telefishino qaar kuwaasi oo lagu laaluusho ka hadalka wax walba oo dhaawici kara dowladnimada iyo madaxdeena qaranka. Aan isweydiinee warbaahinta maanta jirta ma waxay noqotay mid loo adeegsado la safashada siyaasadaha is diidan ee Soomaaliya? Haa, Haa, Haa, balse arinku sidaa ka duwan hase ahaatee meeshu markii ay warbaahin timaado waxaa dhacda in warbaahintaasi bandhiggeedu ay la socdaan shacbiyad …